Shrinking သည် Ted Lasso | ဖန်တီးသူများမှ Apple TV + ဟာသအသစ်ဖြစ်သည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
Shrinking သည် Ted Lasso ဖန်တီးသူများမှ Apple TV + ဟာသအသစ်ဖြစ်သည်
Ignatius ခန်းမ | | Apple TV
Apple TV + တွင်သူတို့သည်ဟာသ၏ပထမရာသီ၏အောင်မြင်မှုအများစုကိုရယူလိုကြသည် Ted lasso ပြီးတော့ဒီအမျိုးအစားကိုဆက်ကစားဖို့ယုံကြည်နေပုံရတယ်။ Apple သည်ကြေငြာချက်အသစ်တစ်ခုရရှိခဲ့ပြီး Bill Lorence (Ted Lass0 ၏ဖန်တီးသူတစ် ဦး) နှင့်တတိယမြောက်ပူးပေါင်းမှုဖြစ်မည့် အမည်ရှိဟာသအသစ်တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်သည် ကျုံ့.
ဒီဟာသအသစ်မှာသူလည်းပါဝင်ပါလိမ့်မယ် Brett Goldstein (ဇာတ်လမ်းတွဲတွင် Roy Kent ဟုလူသိများသည် Ted lasso) ၎င်းသည်ဖြစ်လိမ့်မည် Jason Segel သရုပ်ဆောင်ဟာသတွင်သူ၏အခန်းကဏ္ for အတွက်အဓိကလူသိများသည် သင့်အမေနဲ့ဆုံတွေ့ပုံ.
Jason Segel ကသရုပ်ဆောင်သည် တည်ထောင်သူနှင့်အတူအနားယူသူ therapist ပြီးတော့ပရမ်းပတာဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုမင်းတကယ်ထင်တာတွေကိုမင်းရဲ့ဖောက်သည်တွေကိုပြောပါ။
၎င်းသည် Apple TV +နှင့် Jason Segel ၏ပထမဆုံးပူးပေါင်းမှုမဟုတ်ပါ ၎င်းသည်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည် ကောင်းကင်ကနေရာတိုင်းမှာ Apple Studios မှထုတ်လုပ်ပြီး Jandy Nelson ရေးသားသောနာမည်တူ novelda ကိုအခြေခံသည်။
၏အမှု၌ ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ဇာတ်ညွှန်း ၎င်းတို့မှာ Jason Segel၊ Bill Lawrence နှင့် Brett Goldstein တို့ဖြစ်သည်။ Ted Lasso စီးရီးနှင့်အတူနောက်ဆုံးနှစ်ပိုင်း၏အောင်မြင်မှုနှင့်အတူဤဟာသ၏အောင်မြင်မှုကိုလက်တွေ့ကျကျအာမခံနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။
Bill Lawrence သည် Warner Bros နှင့်စာချုပ်ချုပ်ထားပြီးလက်ရှိတွင်ပြန်လည်ညှိနှိုင်းနေသည်။ ယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ပုံရသည် Apple သည်သင်၏ပရောဂျက်များအားလုံးအတွက်ကျယ်ပြန့်သောအင်္ကျီများပေးအပ်သည် ဒါကြောင့် Warner Bros နဲ့ဆက်ပြီးလုပ်မယ့်အစားသူက Apple TV +အတွက်သီးသန့်အလုပ်လုပ်သွားခဲ့တာအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ဘူး။
Ted Lasso နှင့် Shrinking အပြင် Bill Lawrence သည်စီးရီးတွင်အလုပ်လုပ်သည် မကောင်းတဲ့မျောက်p ဟုလူသိများသောတစ်တွဲတည်းသာဖြစ်သည်Vince Vaughn ကသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » Apple TV » Shrinking သည် Ted Lasso ဖန်တီးသူများမှ Apple TV + ဟာသအသစ်ဖြစ်သည်
USB Power Delivery protocol (သို့) Apple ၏ကိုယ်ပိုင်အားသွင်းကြိုးများနှင့် Apple Watch Series7အတွက်အမြန်အားသွင်းပါ
iOS 15 ကို Drag & Drop ဖြင့်ဓာတ်ပုံများနှင့်စာသားများကိုလျင်မြန်စွာကူး။ သိမ်းပါ